Ogaden Online: The official homepage of Ogaden on the Internet - Jaaliyada Ogaden ee London, UK oo ku waabariisatey Safaarada Wayaanaha
Text size	Home Horn NewsDjibouti Somalia Eritrea Kenya Ethiopia Ogaden WararkaOgaden Itoobiya Soomaaliya Kenya EntertainmentMusic HealthDiet and Fitness You and Your Family Commentary & AnalysisEditorial Opinion Community EventsWararka Tacsi Tahniyad Ogeysiis Announcement Radio Xoriyo Radio ICDSabti Axad Isniin Arbaco Radio Qorahay Home Wararka Ogaden Jaaliyada Ogaden ee London, UK oo ku waabariisatey Safaarada Wayaanaha
Jaaliyada Ogaden ee London, UK oo ku waabariisatey Safaarada Wayaanaha	Saturday, 22 August 2009 16:25	Jaaliyada Ogadeniya ee London, UK ayaa saaka ku waabariisatey Safaarada Wayaanaha ee London. Jaaliyada Ogadeniya oo ay ka muuqato cadho aad u badan ayaa is hortubey Safaarada.Sida Wariyaheenu soo tabinayo, Dhagar qabayaasha ayaa si hoose u qaybiyey 42 ticket oo ay ugu tala galeen Dabaqoodhiyiinbta doolka iyo wixii taabacsan Siyaasada Itoobiya. Balse sida la sheegayo dad badan ayaa ku gacan sayrey in ay qaataan martiqaadaas. Ilaa hada ma jiraan cid albaabka Safaarada ka gashey oo ka qayb qaadaneysa kulanka, inkasta oo la sheegayo in la akey dhowr qof oo ka mid ah Dabaqoodhiyiinta doolka ah oo aaga gaaf wareegaya. Sidoo kale, Jaaaliyada Ogadeniya ee London ayaa weli hortuban Safaarada. La soco wararka dambe Tweet
Last Updated ( Saturday, 22 August 2009 16:39 )